သမ္မတ ဦးထင်ကျော် အပေါ် နယ်ပယ် အသီးသီးက ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားလဲ! ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
သမ္မတ ဦးထင်ကျော် အပေါ် နယ်ပယ် အသီးသီးက ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားလဲ!
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Wednesday, March 16, 2016 News No comments
သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ကို သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ရက်က တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - အီးပီအေ)
ရန်ကုန်၊ မတ်လ ၁၅
နိုင်ငံတော် သမ္မတ နေရာကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က တင်မြှောက်သည့် ဦးထင်ကျော်က ၃၆၀ မဲဖြင့် အနိုင်ရကာ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံရပြီ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပွဲအား ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် မတ်လ ၁၅ ရက်က ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အတွင်း ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရှိသူ ၆၅၂ တွင် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က မဲအများဆုံး ၃၆၀ ရရှိကာ အပြတ် အသတ် အနိုင် ရခဲ့သည်။
ဒုသမ္မတများဖြစ်သည့် ဦးမြင့်ဆွေက ၂၁၃မဲ၊ ဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူက ၇၉မဲ ရရှိခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ရွေးချယ် တင်မြှောက် အပြီး သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ကို နယ်ပယ် အရပ်ရပ်က ပြည်သူများ၏ အမြင် နှင့် မျှော်လင့်ချက် များကို သိရှိစေရန် မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားသည်။
ဦးထင်ကျော်သည် ကဗျာ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်၏ သားဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းကို ဦးဆောင် နေသူဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စုစုလွင်မှာ NLD ၏ နာမည်ကြီး ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဦးလွင်၏ သမီးဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ပေးခြင်း ခံထားရ သူလည်း ဖြစ်သည်။
ပုဒ်မ (၅၉)စလုံးကို မပြင်တော့ဘူး ဆိုကတည်းက အမေစု သမ္မတ မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုတာ သိခဲ့တယ်။ စိတ်အရမ်း ပူခဲ့တယ်။ အမေရွေး ထားတဲ့ ဦးထင်ကျော်ဖြစ်တာ ကျေနပ်တယ်။ သူက အမေကိုလည်း ယုံကြည်တဲ့သူ လေးစားတဲ့သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ ပညာတတ် မျိုးရိုး အစဉ်ဆက် အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်နေတယ်။ သမ္မတဖြစ်တာ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာတယ်။
ဦးထင်ကျော်ကို လူတိုင်း ချစ်ကြတယ်။ ခင်ကြတယ်။ စိတ်ထားနူးညံ့တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ သူကောင်းကောင်း လုပ်သွားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ လက်ရှိ အမတို့ နိုင်ငံက ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့က အများကြီး လုပ်ရမှာ။ ဘက်ပေါင်းစုံက ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်နေတယ်။
သေခါနီးလူမမာ ဒဏ်ရာ ပလာပွနဲ့ လူကို ဆေးကုရမှာ ဆိုတော့ အထိခိုက် မခံဘူးလေ အရမ်း ပညာသာ ပါပါနဲ့ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမှာ။ ကဏ္ဍ အစုံမှာ ချွတ်ခြုံ ကျနေတော့ ငါးနှစ်အတွင်း ဖြေရှင်းရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကောင်း ကျော်လွှားနိုင် မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် (သမ္မတ အကြံပေး) စီးပွားရေး ပညာရှင်
ဦးထင်ကျော် သမ္မတဖြစ်တာ ကြိုဆိုတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆိုရင် စီးပွားရေးကို စပြောင်းလဲ သင့်တယ်။ နောက် အရေးကြီးတာ ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့။ ဒီကဏ္ဍ နှစ်ခုကို အဓိက ပြောင်းလဲ သင့်တာပေါ့နော်။
သူက တာဝန် သိတက်သူ အရည်းချင်း ပြည်ဝတဲ့ သူမျိုးကို ရွေးချယ် လိုက်နိုင် တာကိုက တိုင်းပြည်ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း အကြီးမားဆုံး ပြောင်းလဲမှု ပါပဲ။ အထူးခြားဆုံး ပြောင်းလဲမှုပေါ့။ ကျွန်တေ်ာတို့ တွေလည်း နောက် ငါးနှစ်ကို အရှိန် အဟုန်နဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ကို တိုက်တွန်းတယ်။ အစိုးရ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။
ဒေါ်ညိုညိုသင်း (ဥပဒေ ပညာရှင်)
အန်တီ ကတော့ တိုင်းပြည် အတွက် အားရတယ်။ နှစ်ငါးဆယ် အတွင်း ပထမဆုံး အရပ်သား အစိုးရ ဖြစ်သွားတာကို ဝမ်းသာတယ်။ ဆက်လက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုဆို ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ဆိုရင် မြန်မာ လူဦးရေး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကျေးလက် ဒေသက သူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ကို လူမွဲလို့ ပြောရမယ်။
သူတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိက ဆောင်ရွက်ပေး စေချင်တယ်။ လယ်ယာ ကဏ္ဍကို ဖွံ့ဖြိုးဖို့ကို အဓိက ဆောင်ရွက် ပေးစေ လိုပါတယ်။ လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်း အစိုးရ အနေနဲ့ အပြန် အလှန် ထိန်းကျောင်း စေချင်တယ်။ Congratulation!
သွေးမစွန်းသောလက်များရဲ့ပိုင်ရှင် ဦးထင်ကျော်ကို နိုင်ငံတော်ရဲ့သမ္မတကြီး အဖြစ် ယနေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကြီးက ၆၅၂ မဲ မှာ ၃၆၀ မဲနဲ့ တခဲနက် တင်မြှောက် လိုက်တာကို ဂုဏ်ယူ ပါတယ်။
ဦးမြင့်ကျော် (မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်)
ဒီလက်ရှိ အခင်းကျင်း ကတော့ ပြည်သူ အများစုက လိုချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ဖို့ ခက်ခဲနေလို့ ရနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အခြေအရ ဒီလိုမျိုး ရွေးရတဲ့ သဘောပါ။ ရိုးသားတယ် ပညာတတ်တယ်။ ဖြောင့်မတ်တယ် ဆိုတာကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့။ ဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်တော့ အကောင်းဆုံး လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။
ပြည်သူ အားလုံးကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကိုပဲ ဖြစ်စေ ချင်တာပေါ့။ အစိုးရ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး စလုပ်မယ် ဆိုရင် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး က နံပါတ် (၁) အရေးကြီး ဆုံးပဲ၊ ဒုတိယက တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ လူအများရဲ့ စီးပွားရေးရယ် မြေယာ ပြဿနာတွေ ရှိမယ်။ ဒုတိယ သမ္မတတွေက သမ္မတ လောက်တော့ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပေမယ့် စစ်တပ်ဖက်က ဦးမြင့်ဆွေ ထက် သမိုင်းကြောင်း ကောင်းတဲ့ သူတွေရှိရဲ့သားနဲ့ တင်တယ် ဆိုတော့ ဦးသန်ရွှေရဲ့ အရိပ်တွေ ရှိနေတုန်းပဲလို့ ယူဆတယ်။
သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ကိုတော့ တစ်ခြား နေရာတော့ ပြောစရာ မရှိဘူး နိုင်ငံရေး position အရ ဒေါ်စုကိုပဲ ဖြစ်စေ ချင်တယ်။ ဒေါ်စု လမ်းညွှန်မှုနဲ့ သွားရမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရောင့်ရဲပြီး အကောင်းမြင် တာမျိုးတွေ သိပ်များတယ်။
ဒေါက်တာ ရန်မျိုးသိမ်း (နိုင်ငံရေး လေ့လာ သုံးသပ်သူ)
သမ္မတအသစ် ဦးထင်ကျော်က လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ယူပြီး ဒီနိုင်ငံကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုကို ထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်း သမ္မတ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲ လာတဲ့ ထဲမှာတော့ နိုင်ငံ အတွက် အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်မယ့် သူလို့ မြင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံ ထဲမှာ ဒုတိယ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံ စာရင်း ဝင်နေတယ်။ လက်ရှိ အစိုးရ အနေနဲ့ မြန်မာပြည် ဆင်းရဲ မွဲတေမှုတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးတွေကို လျော့ချ နိုင်ရမယ်။ မဖြစ်မနေ အကောင်အထည် ဖော်နိုင် ရပါမယ်။ အဲဒီ အတွက် အာဂတိ လိုက်စားမှုကို ထိရောက်အောင် ကာကွယ်နိုင် ရပါမယ်။
နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ဆိုရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ပုံ အကျပ် အတည်းကို ပြင်ဆင်ရမယ်။ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်မှုကို အကောင်ထည် ဖော်သင့်တယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ရွေးချယ် ထားတဲ့ သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်း အစိုးရ အဆက်ဆက် တွေထက် သာလွန်းတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဦးစိုင်းကျော်ညွှန့် (ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ)
ကျနော်တို့ အားလုံး မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်း ဦးထင်ကျော် ဖြစ်လာတာပေါ့။ သူက မိသားစု နောက်ခံရော ပညာ အရည် အချင်းရော ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင် သွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ အကောင်းမြင် ယူဆ ပါတယ်။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဖို့ကတော့ လွှတ်တော် တစ်ခုတည်းက လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဖို့က လွှတ်တော်ပြင်ပ နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံး ပါဘဲ။ တပ်မတော်က သဘော တူတယ်ဆိုလည်း တပ်မတော်က ပြင်စေ ချင်သလိုပဲ ပြင်လို့ရမှာ။ လွှတ်တော် အတွင်း အပြင်ကနေ လုပ်ဆောင် သွားရမှာပါ။
တပ်မတော် သဘောမပါဘဲ ပြင်လို့ မရပါဘူး။ လာမယ့် အရပ်သား အစိုးရသစ် အနေနဲ့ တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာ လိုက်မယ် ဆိုရင် တခြား လက်နက်ကိုင် တွေပါ ပါဝင် လာလိမ့်မယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကနေ ရလာတဲ့ သဘော တူညီချက် ကနေ ပြီးတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်မယ် ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမယ်။
မဇ္ဈိမသတင်း by ဝါဆို
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/12361
Read more: ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: သမ္မတ ဦးထင်ကျော် အပေါ် နယ်ပယ် အသီးသီးက ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားလဲ!